के गर्भनिरोधक औषधीले स्तनको आकारमा वृद्धि हुन्छ ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalके गर्भनिरोधक औषधीले स्तनको आकारमा वृद्धि हुन्छ ?
Home स्वास्थ्य के गर्भनिरोधक औषधीले स्तनको आकारमा वृद्धि हुन्छ ?
के गर्भनिरोधक औषधीले स्तनको आकारमा वृद्धि हुन्छ ?
गर्भनिरोधको जिम्मेवारी विशेषगरी महिलाकै हुन्छ । यसकारण अनावश्यक गर्भ रोक्नका लागि पिल्स खान्छन् । लगातार इमर्जेन्सी पिल्स खाएपछि महिला आफूमा परिवर्तन महसुस गर्छन् । यसमा अचानक तौल बढ्नु पनि एक हो । महिलाका लागि योभन्दा ठूलो कुरा के होला । त्यसो भए के पिल्सले तपाईंको तौलमा वृद्धि गरिरहेको छ रु
डेढ वर्षको छोरा बचाएर आफ्नै ज्यान गुमाए इन्जिनियर दम्पत्ति
नेपालमा दैनिक साढे चार अर्वको विदेशी सामान आयात